Soosaarka Shiinaha Graphite Dahaarka Maro adag Warshad & Warshad | Jiashun
Mashiinka muraayadda dhalada ah ee lagu dhejiyay garaafka wuxuu ku shaqeyn karaa 700 ℃. Mashiinka fiber galaas dahaarka leh dahaarka leh ayaa leh iska caabin adag khilaafaadka iyo u adkaysiga daxalka kiimikada. Sidaa darteed, maro fiber galaas dahaaran maro fiber waxaa inta badan loo isticmaalaa in daxalka kiimikada adag, acid iyo caabin alkali ama deegaanka heerkulka sare.
Waxaa loo adeegsaday daboolida iyo ilaalinta heerkulka sare.
Iyada oo loo adeegsanayo kheyraadka ku saabsan faafitaanka macluumaadka ganacsiga caalamiga ah, waxaan soo dhaweyneynaa rajada laga qabo meel kasta oo ka mid ah shabakadda iyo qadka. In kasta oo ay jiraan waxyaabo tayo sare leh oo aan bixinno, adeegga wadatashiga ee wax ku oolka ah ee qanciya waxaa bixiya kooxdeena adeegga iibka ka dib. Liisaska sheyga iyo xuduudaha faahfaahsan iyo wixii macluumaad kale ah ee weil ayaa laguugu soo diri doonaa adiga waqtiga ku habboon su'aalaha. Marka fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama na soo wac markii aad wax su'aalo ah ka qabtid ururkeenna. ou sidoo kale waxaad ka heli kartaa macluumaadka cinwaankayaga kana iman kartaa shirkadeena. Waxaan helnaa sahan ku saabsan dukaankeenna. Waxaan ku kalsoonahay inaan la wadaagi doonno waxqabad wadajirka ah isla markaana aan abuuri doono xiriir iskaashi oo adag saaxiibadeena ku dhex sugan suuqan. Waxaan raadineynaa weydiimahaaga.
Iyagu waa moodello waara oo kor u qaada wax ku oolka adduunka oo dhan. Duruufo jira awgood laguma waayi doono shaqooyinka waaweyn waqti deg deg ah, waa mid adiga kugu habboon oo tayo wanaagsan leh. Iyadoo ay hagayso mabda'a ah "Prudence, Kartiency, Union and Innovation. Shirkadu waxay sameysaa dadaal xoogan oo ay ku balaarineyso ganacsigeeda caalamiga ah, sare u qaadaysa macaashkeeda iyo sare u qaadista waxsoosaarkeeda dhoofinta. Waxaan ku kalsoonahay inaan lahaan doono rajo firfircoon in loo qaybiyo aduunka oo dhan sanadaha soo socda.
Hore: marada marooga la mariyey ee loo yaqaan 'vermiculite'
Xiga: buste alxanka marogtada ah